Xalka A buuxi Sidee loo nadiifiyaa MacBook Pro / iMac
Nadiifi keyboard, Screen ah, DVD Drive oo dheeraad ah oo ku Your MacBook Pro
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay si aad u nadiifiso keyboard ah, screen, DVD drive, Jack daaraa, Dekedaha USB, iyo in ka badan oo ku saabsan MacBook Pro haddii aad u isticmaali muddo dheer. Waxaad ka arki kartaa boodh qarada meel kasta waa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad kaliya oo aan si toos ah u isticmaali kartaa xoogaa yar oo maro qoyan si aad u samaysay shaqada, sababta oo ah dhibic biyo maro qoyan waxay sababi kartaa Pro MacBook iska joojiso ka shaqeeya. In socda, Talooyin iyo tabaha ku qoran yihiin sida ay u nadiifiyaan MacBook Pro / MacBook Air / iMac. Guji qaybta aad xiisaynayso.
1. Nadiifi MacBook Pro keyboard
2. Nadiifi MacBook Pro Screen
3. Nadiifi Imaanshaha ee MacBook
4. Dekedaha USB Nadiifi on MacBook
5. Nadiifi daaraa Jack
6. Nadiifi DVD Drive
7.Dos & Xayeesiinta
Nadiifi MacBook Pro keyboard
Sidaas, waxaad qalad sameeyay oo cuna hore ee aad MacBook iyo hoos aad cunto ama cabbitaan ku yaal. Cunto ama cabbitaan wax walba ka sarreeya keyboard ah, hadda waxa baad u dhaqmaysaa? Si aad u billowdo nadiifinta aad keyboard, aad laptop xidho iyo in la hubiyo adabtarada awood aan ku xirnayn u galay. Marka hore, hubi in aad u hesho tuwaal engegan oo si deg deg ah tirtiraynaa, cunto ama cabitaan off aad keyboard. Laakiin, aadan deg deg ah oo ku filan si ay u tirtiri kijinka iyo hadda aad keyboard waa dhagta. Tallaabada labaad waa in la sameeyo si ay u takhaluso keyboard in dhagta ay qaadan tuwaal engegan oo codsan saliidda ilmaha ku yaal. Hadda, si taxadar leh u tirtiri furayaasha saliid ilmaha codsatay tuwaalka qalalan. Hambalyo, aad haddeer haysatidna keyboard a non-dheg nadiif ah!
Nadiifi MacBook Pro Screen
Nadiifinta aad screen MacBook waa u fududahay, in alla inta aad tahay mid aad u taxaddar ku saabsan sida aad u samayn. Tallaabada ugu horreysa ee ugu muhiimsan waa in la damiyo aad screen laptop iyo in la hubiyo in adabtarada awood aan ku xirnayn galay laptop ah. Tani waa si loo hubiyo in aysan waxba dhicin adiga ama laptop ah in. Tallaabada Labaad, ka heli maro microfiber iyo bilowdo ka saareen kasta oo qayb ka boodh aad shaashadda. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay cadaadis badan inkastoo. Maxaad samayn kartaa waa in aad qaban screen laptop ka dib ka dibna bilowdo nadiifinta shaashadda maro microfiber ah. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay qabtaan screen laftiisa ama waxaad heli doontaa faraha ku yaal. Marka aad samaysay nadiifinta shaashadda, aad haddeer haysatidna shaashad MacBook nadiif ah! Laakiin, yaa ugu Sugan kuwa faraha ay screen iyo Tirtirin ma laga takhaluso waxaa ka mid ah, waxbarida aado si aad u. Tallaabada koowaad, dami aad laptop iyo bareesada ka adabtarada awood. Tallaabada Labaad, ka heli maro microfiber ah oo kaliya wax yar qoyan. Ha ku qoynin shukumaan biyo ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku qoyso mid tip ee tuwaalka. Tallaabada saddexaad, u isticmaalaan in caarada qoyan ee tuwaalka si tirtiraynaa faraha shaashadda. Ha qalalan oo markaas tirtiri shaashada la maro microfiber qalalan si aad u hubiso in aad shaashadda MacBook waa nadiif ah.
Nadiifi Imaanshaha ee MacBook
Si aad u nadiifiso muuqaalka kore ee aad MacBook, waxaad u baahan tahay inaad raacdid talaabooyinkan soo socda sida lagu faray. Tallaabada koowaad waa dami aad laptop iyo bareesada ka adabtarada awood. Tallaabada Labaad, ka heli maro jilicsan ee wax sort oo qoyan hal dhinac waxaa ka mid ah. Haddii ay jirto biyo aad u badan tuwaalka, tuujin biyaha xad-dhaaf ah oo ka mid maro ah ka dibna aad shukumaan waa in qoyan. Tallaabada saddexaad, si taxadar leh u tirtiri aad MacBook halkaas oo fallaadhihii waa tilmaamaya. Waayo, kuwa la hadla ee dhinacyada, daawato baxay in. Ha u tirtir maro qoyan. Isticmaal maro qallalan u hadla kuwa.
Dekedaha USB Nadiifi on MacBook
Fadlan si taxadir leh u akhri tallaabooyinka ku saabsan sida aad u nadiifiso dekedaha USB aad on your MacBook. Tani waa tallaabo ay si sahlan laakiin waxa aad u baahan tahay in aad ka taxadartaa in aysan samayn wax aan baray. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay isticmaalaan nooc kasta oo dareere ah ee habkan. Tallaabada koowaad, dami aad laptop iyo bareesada ka adabtarada awood. Tallaabada Labaad, ka iibsan hawada Tifaftirayaasha. Tallaabada saddexaad, buufin gudaha dekedaha USB aad la hawada Tifaftirayaasha. By samayn, hawada soo afuufi doonaa qayb ka boodhka gudaha dekedaha USB aad. Hawada Tifaftirayaasha waa habka ugu wanaagsan ee lagu nadiifiyo dekedaha USB aad. Waxaad kaloo isticmaali kartaa suufka ah bedelka haddii aadan haysan wax hawada Tifaftirayaasha in aad dukaanka deegaanka.
Nadiifi daaraa Jack
Wixii nadiifinta gudaha Jack daaraa, waxa ay noqon doontaa hab la mid ah sidii aad ku samaysay nadiifinta dekedaha USB aad. Tallaabada koowaad, dami aad laptop iyo bareesada ka adabtarada awood. Tallaabada Labaad, waxay isticmaalaan hawada Tifaftirayaasha qarxiyo gudaha Jack daaraa. Qurub ciidda oo kale, haddii ay jiraan wax kasta oo ay yihiin, is saari doonaa by hawada Tifaftirayaasha.
Nadiifi DVD Drive
Nidaamka isku mid ah in aad loo isticmaalo labada kor ku xusan waxaa loo isticmaali doonaa nadiifinta aad MacBook DVD drive. Tallaabada koowaad, dami aad laptop iyo bareesada ka adabtarada awood. Tallaabada Labaad, waxay isticmaalaan hawada Tifaftirayaasha isku qarxiyo gudaha MacBook DVD drive iyo hubi in aad saaray caws hawada Tifaftirayaasha gudaha drive DVD si ay qayb ka ciidda laga saari doonaa.
Dos & Xayeesiinta
RAAC TILMAAMAHAN THE!
Nadiifi gudaha ee MACBOOK JEER, Ha u ogolaan qurubyada boodhka SAMAYSO GUDAHA.
QAADAN taxaddaraan marka ay NADAAFADA MACBOOK. WAA laptop qaali ah, HA jebisaan.
HA U ISTICMAALIN wax cabitaan ah nadiifinta gudaha Dekedaha AAD USB, daaraa JACK, IYO DVD Drive.
HA sayr biyo AAD keyboard TO daahir.
HA U ISTICMAALIN fidhicil TO doorto habaaska ka GUDAHA Dekedaha AAD USB, daaraa JACK, IYO DVD Drive!
CleanMyMac - caan ku Tool si nadiif ah Mac
> Resource > Mac > Sidee loo nadiifiyaa MacBook Pro / MacBook Air / iMac